March 19, 2017 – Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatt, ayaa maanta booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid Degmada Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose, iyadoona uu kula kulmay Saraakiisha iyo Ciidamada Kenya, ee qaybta ka ah ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Madaxweynaha Kenya oo xirnaa dareyska Ciidamada Difaaca ee dalka Kenya, ayaa markii ugu horeysay booqasho ugu yimid Ciidamada Kenya ka joogga Gobolada Koonfureed ee Somaliya. Ciidamada Kenya, ayaa taliskooda ugu wayn uu yahay Dhoobley.
Madaxweynaha Kenya oo soo kormeeray daafacyada Ciidamada Kenya ku leeyihiin Degmadaasi Dhoobley, ayaa markii dambe hadal u jeediyay, isagoona u sheegay inay gudaha Soomaaliya u jooggaan la dagaalanka Al Shabaab.
Madaxweynaha ayaa ereyo ad adag ku sheegay in Ciidamada Kenya looga fadhiyo inaanay cafin, isla-markaana ay kaga takhalusaan Xoogaga Ururka Al Shabaab.
Wuxuu soo hadalqaaday in joogistooda Soomaaliya ay ku badbaadayan dad badan oo Kenyan ah, isagoona kaga mahadceliyay hawlgalka ay u jooggaan Soomaaliya, ee ah la dagaalanka ururka Al Shabaab.
Waa markii ugu horeysay oo uu Madaxweyne Uhuru Kenyatta soo booqdo Ciidamada Difaaca Kenya ee ku sugan Goboladda Jubbooyinka, tan iyo markii Ciidamada Kenya ay xuduuda ka soo gudbeen, bishii October ee sanadkii 2011-ka.